HDPE qodid tuuboyinka - Shiinaha Ningbo Sunplast tuuboyinka
Kooreeya Repair HDPE
HDPE Electrofusion Equal xigay
HDPE Electrofusion 90 Degree xusulka
HDPE Electrofusion 45 Degree xusulka
HDPE Electrofusion Yaraynta ereydaas
HDPE Heerka ISO4427 ku milmaya / biibiile macdanta ka dn160-1200mm, welded la flanges labada dhamaadka, la heli karo in 6m ama 11.8m dhererka, customrized siddo taageero steel heli karo, tayo sare leh qiimo fiican jumlada. Nala soo xiriir wixii faahfaahin dheeraad ah oo ku of our biibiile ku milmaya HDPE !!!
Supply Kartida: 3 × 40ft weelasha toddobaadkii
Port Of Departure: Ningbo ama Shanghai
Shuruudaha Payment: T / T ama LC-noqosho ma arko
Waqti Delivery: Iyadoo ku xiran tiro amarka.
HDPE biibiile waarididda ah la sameeyey by HDPE (polyetylen cufnaanta sare) wax oo loo soo saaray in dhinacyada kala duwan si ay u isticmaalaan inta badan ku saabsan badda si ay u fuliyaan of ciid badda ku milmaya of dhoobada. biibiile ku milmaya HDPE ayaa soo saaray iyo welded sida a "HDPE biibiile flanged", kuwaas oo labada dhinac waxaa welded la adapters flange HDPE & siddo taageero steel.
biibiile waarididda HDPE wuxuu noqon karaa si fudud in la soo ururay ama dismountabled, by maroojin kor / off ah handarraabbadeedii / nuts for xiriir methanical of laba siddo oo taageero steel dhamaadka biibiile.
SUNPLAST HDPE biibiile ku milmaya waxaa sida caadiga ah soo saaray 5.8 ama 11.8m lenghts. biibiile waxaa la siin karaa laga bilaabo dn160-1200mm leh oo dhumucdiisuna waxay derbiga kala duwan sida JDS kala duwan & cadaadis loogu talagalay rating, oo siddooyinkoodana wuxuu taageero steel caadadiisu-dhigay ayaa la heli karaa.
Details Warbixinta Gaarka ah ee
magaca Product HDPE biibiile ku milmaya
Cabirada heli karaa DN160-1200mm
ratings JDS / cadaadiska SDR11-PN16, SDR13.6-PN12.5, SDR17-PN10, SDR21-PN8, SDR26-PN6
tayada Top PE100 bikrad wax cayriin
Colors diyaar u biibiile Madow ama buluug, ama sida codsiyada
Heerarka biibiile ISO4427, AS / NZS4130, BS EN 12201
Heerarka siddo taageero steel
Sumadayn biibiile logo Macaamiisha ayaa lagu tuntay karaa
Muunado heli karaa Haa, muunad diyaar u tiro yar
habka xirxiraan Xirxirida dhoofinta Normal.
Dhererka biibiile wuxuu noqon karaa in 5.8 ama 11.8m, labada welded la flanges
mar wax soo saarka hogaanka Iyada oo ku xidhan tiro amarka.
About 10 maalmood weel 20ft, 15-20 maalmood weel 40ft
waqtiga damaanadda 3 sano oo caadi ah iyagoo isticmaalaya
dheer Payment T / T ama LC arko
FOB loading dekedda Ningbo ama Shanghai China
SUNPLAST biibiile ku milmaya HDPE la siin karaa dn160mm in 1200mm. caddaymaha sida hoos ku qoran:
JDS / cadaadiska
Rating Cadaadis Caadi ah (MPA)
Waayo, wax PE100
Sida xal fiican ee shaqada waarididda ah, SUNPLAST HDPE biibiile ku milmaya waxay leedahay faa'iidooyin badan sida soo socota:
☑ daxalka iska caabin
☑ qalleyf High
miisaanka ☑ Light
☑ Waa sahal in la shirin ama dismountabled
☑ dabacsan iyo caabiga xagashada awood u fiican.
☑Good xirtaan iska caabin ah, derbiga hooseeyo Wehliyaha khilaaf, iska caabin socodka yar, awood gudbinayeen fiican.
☑ kharashka nidaamka Low, dayactirka yar kharash
Previous: HDPE Gas tuuboyinka
Sunplast, iyada oo loo marayo horumarinta ka badan 15 sano, waxaa hadda loo yaqaan mid ka mid ah soo saarayaasha sare iyo iibiyeyaasha biibiile hdpe (biibiile poly) ee bulaacada biyaha & dheecaan ee Shiinaha. Our Warshadda ayaa soo bandhigay farsamooyinka badan oo horumarsan iyo qalab u galay. Fadlan lacag la'aan ah si ay u iibsadaan alaabta tayada iyo qiimaha hooseeyo sameeyey Shiinaha naga.
10 HDPE tuuboyinka
12 HDPE tuuboyinka
16 HDPE tuuboyinka
18 HDPE tuuboyinka
2 inji HDPE tuuboyinka
2 Poly tuuboyinka
20 HDPE tuuboyinka
24 HDPE tuuboyinka
3 HDPE tuuboyinka
4 HDPE tuuboyinka
6 HDPE tuuboyinka
600mm HDPE tuuboyinka
8 HDPE tuuboyinka
Qodid oo Grade HDPE tuuboyinka
Sabayn qodid tuuboyinka
HDPE ku milmaya sabeyn tuuboyinka
HDPE ku milmaya tuuboyinka
tuuboyinka HDPE Waayo, ku milmaya
HDPE caaga tuuboyinka
HDPE caaga tubbada
HDPE Poly tuuboyinka
Mugga High tuuboyinka polyetylen
PE ku milmaya tuuboyinka
Poly ku milmaya tuuboyinka
Polyetylen tuuboyinka ku milmaya